Ny zafikeliko vavy telo taona dia naneho ny herin’ny tsy fananan-tsiny sy ny fanetren-tena mba hampifandray antsika amin’Andriamanitra. Nandeha niaraka tamin’ny fianakaviany hamonjy ny varavarana misokatra tao amin’ny Tempolin’i Brigham City ao Utah izy. Nijery ny manodidina izy tao amin’ny iray tamin’ireo efitra tao amin’izany trano tsara tarehy izany ary nanontany hoe: “Neny a, aiza i Jesoa?” Nazavain’ny reniny taminy fa tsy hahita an’i Jesoa tao amin’ny tempoly izy, fa ho afaka kosa hahatsapa ny fitaomam-panahiny ao am-pony. Nandray tsara tamim-pitandremana ny valintenin’ny reniny i Eliza ary toa afa-po tamin’izany. Dia nofaranany tamin’ny hoe: “Lasa nandeha nanampy olona hafa i Jesoa.”
Tsy nisy lay nandrakotra ny fahatakaran’i Eliza na nanohintohina ny fahitany ny zava-misy marina. Akaiky azy Andriamanitra, ary nahatsapa ho akaiky an’Andriamanitra izy. Fantany fa tranon’ny Tompo ny tempoly ary nahatakatra ihany koa izy fa i Jesoa Kristy izay nitsangana tamin’ny maty sy feno voninahitra dia manana vatana ary tsy afaka mandeha afa-tsy amin’ny toerana iray ihany amin’ny fotoana iray.3 Raha tsy ao an-tranony Izy, dia fantatr’ilay zafikeliko fa tsy maintsy any amin’ny toeran-kafa. Ary araka izay fantany momba ny Mpamonjy, dia fantany fa tsy maintsy any rehetra any manao soa amin’ny zanaky ny Rainy i Jesoa. Mazava tsara fa nanantena ny hahita an’i Jesoa izy, tsy noho ny fitadiavany porofo mahagaga ny amin’ny fisiany fa satria tia Azy tsotra izao ilay zafikeliko.
Afaka nanambara ny fampiononana izay ilaintsika sy tadiavintsika rehetra tamin’ilay sainy sy fony mbola zazakely ny Fanahy. Velona i Jesoa Kristy, mahafantatra antsika Izy, miahy antsika, ary mikarakara antsika. Tsy mila mahita an’i Jesoa Kristy isika ao anatin’ny fotoan’ny fanaintainana, ny maha irery, na fisavorovoroan-kevitra mba hahafantarantsika fa mahafantatra ny toe-javatra iainantsika Izy, ary mahafantatra ny iraka izay nampanaovina Azy dia ny hitahy.
Fantatro avy tamin’ny zavatra niainako manokana fa ny zavatra niainan’i Eliza dia afaka hiainantsika, na dia aty aoriana lavitry ny nandaozantsika ny fahazazana aza.